Axmad Madoobe, oo ku baaqay in la ansixiyo heshiiskii laga gaaray doorashada. | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Axmad Madoobe, oo ku baaqay in la ansixiyo heshiiskii laga gaaray doorashada.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo Axaddii shalay kulan gaara la yeeshay xildhibaannada labada aqal ee laga soo doortay deegaannada Jubbaland, ayaa guud ahaan baarlamanka Soomaaliya gaar ahaanna kuwa kasoo jeeda deegaannadiisa waxa uu ugu baaqay in ay ansixiyaan heshiiskii arrimaha doorashooyinka oo lagu gaaray magaalada Muqdisho.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in aanu cidna ku eedi doonin Xildhibaannada intii uu jiray khilaafkii Jubbaland iyo dowladda Federaalka haddii ay taageereen Dowladda, isagoo xusay in aanu jirin cid uu wax u qabo.
“Ma rabo inaan idinku eedo dadka qaarkii qaar baa hoos foorar waxb aa jira, hadaad dowlada la shaqeyseen waa damiirkii shalay idinkula dardaarmay aheyd, idinkuma eedi doono haddii dowladda iyo aniga wax iga jireen waa heshiishnay”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Waxaa uu ka dalbaday Xildhibaannada inay ansixiyaan heshiiska siyaasadeed ee la gaaray iyo inay ansixiyaan Ra’iisul Wasaaraha cusub.
“Ra’iisul Wasaaraha la soo magacaabay waqtigiisa in aad kala shaqeysaan oo soo dhoweysaan, wixii idinka baahan yahay fulisaan, heshiiska siyaasadeed ayaa la gaaray ma ahan xeer waa heshiis siyaasadeed oo aan u aragnay maslaxad inay ku jirto heshiiskaas inuu uusan aheyn xeer ama sharci la marinayo, xalka ugu dambeeyo waa in la fududeeyo”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Madaxda dowlad goboleedyada ayaa la sheegay inay Muqdisho joogayaan inta laga ansixinayo heshiiskii doorasho ee ay maalmo ka hor Muqdisho ku saxiixeen Madaxweynaha dowladda Federaalka iyo Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Qarax ay ku nafweeyeen kuwii waday oo ka dhacay Muqdisho.
Laba askari oo laga afduubtay deegaanka Garas-baalley ee duleedka Muqdisho.
Beesha Caalamka oo war ka soo saartay kulankii DF iyo Midowga Musharrixiinta
Kulan Sanadeedka Golaha Wasiirrada Xukuumadda Somalia oo maanta ka furmay Muqdisho (Daawo)